जाइका/नेपाल : नेपालको विश्वसनीय विकास साझेदार - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
जाइका/नेपाल : नेपालको विश्वसनीय विकास साझेदार
२०७५ साउन १५ मंगलवार
नेपाल जापान सम्बन्ध १९औं शताव्दीकोे अन्त्यदेखि नै रहिआएको इतिहास छ । सन् १८९९ मा जापानी बौद्ध भिक्षु इकाई कावागुची नेपाल भ्रमण गर्ने पहिलो जापानी नागरिक भएको इतिहास छ । त्यसपछि सन् १९०२–१९०५ (राणाकालीन समय)भित्र ८ जना नेपाली विद्यार्थीले जापानमा उच्च शिक्षाको लागि प्रस्थान गरेका थिए ।
यद्यपि, नेपाल जापानबीच औपचारिक दौत्य सम्वन्ध भने सेप्टेम्वर १, १९५६ मा मात्र स्थापना भएको थियो । दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनु २ वर्ष अगाडि सन् १९५४ मा जापानले कोलोम्बो प्लानमा सहभागी भएलगत्तै नेपालीहरुलाई प्राविधिक तालिम दिन थालेका थिए । सन् १९६५ मा टोक्योमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भयो भने त्यसको २ वर्षपछि अर्थात सन् १९६७ मा नेपालमा जापानी राजदूतावास स्थापना भयो । सन् १९७० मा जापानिज ओभरसिज भोलन्टिअर कर्पोरेसन (जेओभिसि)/नेपाल स्थापना भयो । यो नै नेपालको विकासको लागि सहयोग गर्ने पहिलो औपचारिक जापानी संस्था हो । त्यसको ८ वर्षपछि सन् १९७८ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सि (जाइका)/नेपालको स्थापना भयो । जाइका÷नेपालको स्थापनाकालदेखि जापानले आजसम्म नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ । हाल (जेओभिसि)÷नेपाल पनि जाइका÷नेपालकै मातहतमा छ ।
जाइका/नेपालले सहयोग पुराउँदै आएका क्षेत्रहरुः
जाइका/नेपालले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको लागि बहु–आयामिक क्षेत्रहरुमा सहयोग गर्दै आएका छ । जस्तैः
गरिवी निवारणका लागि
दक्षिण एशियाई राष्ट्रहरुमा नेपाल एउटा गरिव राष्ट्रको पंक्तिमा रहेको छ । तसर्थ, नेपालमा गरिवी घटाउने÷हटाउने प्रयासमा जाइका÷नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रहरुमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सहयोग पु¥याउँदै आएको छ ।
कृषि तथा ग्रामीण विकास
नेपालको ग्रामीण जीवन उत्थान गर्नको लागि जाइका÷नेपालले कृषि विकासमार्फत खाद्य सुरक्षा, आय सिर्जना तथा सरकारी तथा कृषक समूहहरुको क्षमता अभिबृद्धिलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । साथै, यहाँका जनताको खाद्य, पिउने पानी, मल जस्ता वस्तुहरुमा सरल र सुलभ पहुँच सुनिश्चित रहोस् भन्ने उद्देश्यसहित कार्य गरेको छ ।
जाइका/नेपालले विभिन्न माध्यममार्फत आधारभूत शिक्षाको लागि पहुँच, गुणस्तर तथा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन पनि टेवा पु¥याएको छ ।
नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था सुधारको लागि पनि यस संस्थाले विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरी आधारभूत स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सेवासम्बन्धी पहुँचको लागि सहयोग गरेको छ ।
लोकतान्त्रिकरण र शान्ति स्थापनाका लागि
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि यस संस्थाले संविधान सभा, निर्वाचन आयोग, मिडिया, कानुनी क्षेत्र साथै केन्द्रीयस्तर र स्थानीयस्तर स्वायत्ततालाई बलियो पार्न सक्दो टेवा पु¥याएको छ ।
आर्थिक सामाजिक आधार खडा गर्नको लागि
आर्थिक विकासको लागि न्यूनतम पूर्वाआधार अति आवश्यक हुन्छ । तर नेपाल जस्तो पहाडी मुलुकमा यस्ता पूर्वाआधारहरुको निर्माण गर्नु धेरै चुनौतीपूर्ण छ । जाइका÷नेपालले यस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण जस्तै यातायात, जल बिद्युत, जल आपूर्ति र शहरी वातावरण विकासको लागि पनि ऋण तथा अनुदानमार्फत प्राविधिक सहयोग गरेको छ ।
जाइका/नेपालले पुराइएका केही उत्कृष्ट नमूनाहरु
मानव संशाधन विकासतर्फ जाइका÷नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म नेपालले जापानवाट विभिन्न विधाहरुमा ५,५२० नेपालीले तालिम प्राप्त गरिसकेका छन् भने २,५८५ जापानी स्वयंसेवकहरुले नेपालमा सेवा पु¥याइसकेका छन् । यातायातको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा बनेपा–सिन्धुली १६० किलोमिटर लामो बि.पी. राजमार्गको निर्माण एउटा उत्कृष्ट नमूना हो । यसले काठमाडौं र पूर्वी नेपालको दुरी छोट्याउनुको साथै पूर्वी नेपालसँगको बैकल्पिक मार्गको रुपमा अहम् भूमिका निभाएको छ । त्यसैगरी काठमाडौं कोटेश्वर सडक विस्तार भएवापत त्यहाँ गुड्ने सवारी साधनलाई निकै राहत भएको छ ।
सन् २०१५ को बिनाशकारी भूकम्पपश्चात जाइका÷नेपालले नेपालमा पुनर्निमाण कार्यलाई अझ तीब्रता दिएको छ । “बिउल्ड बैंक बेटर” को अवधारणामा भूकम्पपीडित क्षेत्रमा आवास, स्कूल आदिको पुनर्निर्माण एवं केन्द्रीय तथा स्थानीयस्तरमा पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न व्यक्ति विशेषका लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्ने कार्यमा जोडतोडका साथ लागिपरेका छन् ।
हालै मात्र अनुदान सहयोगमा गोरखा जिल्लाको बाह्रकिलो–बारपाक सडक खण्डमा ३ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरी आवतजावतको लागि खुल्ला गरिसकेको छ । त्यसैगरी, नेपालको जल बिद्युत उत्पादन कार्यमा एक तिहाई सहयोग जाइका÷नेपालको रहेको छ । तनहुँ जिल्लाको १४० एम डब्ल्यु जलबिद्युत प्रोजेक्टमा जाइका÷नेपाल को–फाइनान्सरको रुपमा रहेको छ ।
जाइका÷नेपालकै सहयोगमा काठमाडौं–नागढुङ्गा सुरुङ्ग मार्ग पनि यही वर्ष सन् २०१८ को मध्यबाट शुरु गरिने भएको छ । पिउने पानीतर्फको सहयोगको कुरा गर्नुपर्दा काठमाडौ. उपत्यकाभित्र मेलम्ची पानी आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पानी उपचार गर्ने प्लान्ट निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी, पोखरामा वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट प्रोजेक्ट पनि सञ्चालनमा छन् ।
शिक्षाको सम्बन्धमा पनि जाइका÷नेपालको ठूलो योगदान रहेको छ । नेपालको शिक्षामा स्तरोन्नत गर्न नेपाल सरकार लागिपरेको अवस्थामा सो योजना सफल पार्न जाइका÷नेपालले टेवा पु¥याएको छ । यसबाट नेपालमा स्कूल व्यवस्थापन पक्ष बलियो हुने अपेक्षा गरेको छ ।
यसरी झण्डै ५ दशक लामो समयदेखि नेपालको विकासमा निरन्तर आप्mनो सहयोगी हात बढाउँदै आएको जाइका÷नेपाललाई सिङ्गो नेपाल र नेपालीले हृदयदेखि सम्मान गर्नै पर्छ । साथै आउँदा समयमा जाइका÷नेपालको सहयोगलाई अझ बिस्तार गर्नको लागि केन्द्रीय सरकारले निःस्वार्थ भूमिका निभाउन अत्यन्त जरुरी छ ।